सर्वसाधारणका लागि आजबाट खुलेको नयाँ आईपीओमा कती दिने आवेदन ? – OnlinePahar
सर्वसाधारणका लागि आजबाट खुलेको नयाँ आईपीओमा कती दिने आवेदन ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:१५ Basanta Khanal	0 Comments	IPO niskasan
१४ साउन, काठमाडौं । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) का लागि आवेदन खुला भएको छ । कम्पनीले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता अर्थात ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको आईपीओका लागि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले न्युनतम् १० कित्तादेखि आवेदन दिन पाइनेछ ।
जीवन विकास लघुवित्तको सेयर एक घण्टामा ७० कित्ता किनबेच
यो पनि पढ्नुहोस्: १४ साउन, काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर (आईपीओ) सूचीकृत पश्चात बिहीबार पहिलो कारोबार भएको छ । यस संस्थाको ६० लाख ८४ हजार कित्ता आईपीओ बुधबार सूचीकृत भएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जीवन विकासलाई न्युनतम् ३०५ रुपैयाँ २७ पैसा देखि अधिकतम ९१५ रुपैयाँ ८१ पैसा मूल्य तोकेको थियो । तोकिएको अधिकतम मूल्यबाटै कारोबार खुला भयो ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – १४ साउन २०७८ बिहिवारको राशिफल पढौं
यस्ता १० लक्षण छन भने तपाइँको मोबाइल ह्याक भएको हुन सक्छ (आजै चेक गर्नुहोस् ) →
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:१८ Basanta Khanal	0